Adrenosterone အမှုန့် (382-45-6) Buy hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / prohormone / Adrenosterone အမှုန့်
rating: အမျိုးအစား: prohormone Tags: Adrenosterone အမှုန့်, ရောင်းရန် Adrenosterone အမှုန့်, Adrenosterone အမှုန့်ပေးသွင်း, Adrenosterone အမှုန့်ကိုဝယ်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Adrenosterone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (382-45-6) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Adrenosterone အမှုန့်လည်း Reichstein ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ, G အဖြစ် 11-keto androstenedione (11-KA4) အဖြစ်လူသိများ, 11-oxoandrostenedione (11-OXO), နှင့် androst-4-ene-3,11,17-trione, အားနည်းအန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် နှင့် 11-ketotestosterone.It တစ်ခုအလယ်အလတ် / prohormone ပထမဦးဆုံးအဘေဆယ်တက္ကသိုလ်အတွက်ဆေးဝါး Institute ကမှာ adrenal cortex byTadeus Reichstein ထံမှ 1936 အတွက်အထီးကျန်ခဲ့သည်။ မူလက, adrenosterone Reichstein ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ G. အ Adrenosterone သဲလွန်စလူသားတွေအတွက်ပမာဏအဖြစ်အများဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ကြောင့်မူလတန်းအန်ဒရိုဂျင်, 11-ketotestosterone ရန်ရှေ့ပြေးသည်အဘယ်မှာရှိငါးအတွက်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏအတွက်ဖြစ်ပေါ်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
I.Adrenosterone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Adrenosterone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 222 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
II ကို။ Adrenosterone အမှုန့်သံသရာ
Commons က BRAND (S): Adrenosterone အမှုန့်
ယေဘုယျအားဖြင့် NAME (S က): 11-OXO, Adrenosterone အမှုန့်, Reichstein ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ, G, 11-keto androstenedione (11-KA4), 11-oxo androstenedione (11-OXO), androst-4-ene-3, 11, 17-trione
ကာယဗလနှင့် bulk ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းမည်သူမဆို Adrenosterone မှုန်တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်နှင့်မည်သို့အသုံးဝင်စနစ်တကျအသုံးပြုသောအခါနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး2သီးခြား Adrenosterone အမှုန့်ထုတ်ကုန်များဟာကာယဗလလောကမှာရှိတဲ့ဆုများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်အဆိုးရွားဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမမှန်ကန်ကြောင်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တဝိုက်ဗဟိုပြုသိရသည်။ ပက်ထရစ်အာနိုးစျေးကွက်မှ Adrenosterone မှုန်ရဖို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်အသုံးပြုမှုလိုလားသူဟော်မုန်းမပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာနှင့်အတူရှိဘယ်လောက်ထိရောက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြသသောဓာတု wizard ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ် bulk ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအဆီလျှော့ချတစ်ဦးခြားနားချက်ကိုအများဆုံးလူကြိုက်များသောအသိအမှတ်ပြုထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
3.What Adrenosterone အမှုန့်များ၏သောက်သုံးသောပါသလဲ
ပုံမှန်အား Adrenosterone powde (CAS 3-382-45) ၏အသုံးပြုသူခံယူနိုငျသောကွဲပြားခြားနားသောသံသရာ6ရှိပါတယ်။ ရလဒ်များကိုအတွက်တခုတ်တရကွာခြားချက်မြင့်မားသည့်သောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဆင့်မြင့်ဆေးညွှန်းအချိန်ငယ်များကာလအဘို့ကိုလည်းအသုံးပြုသင့်ရှိပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်အမြင့်ဆုံးသံသရာများအတွက်ထုတ်ကုန်အများဆုံးပမာဏယူနိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မီနှင့်အပြီးတကယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
300 ရက်သတ္တပတ်သံသရာများအတွက် 9mg
600 ရက်သတ္တပတ်သံသရာများအတွက် 7mg
900 ရက်သတ္တပတ်သံသရာများအတွက် 5mg
ငယ် 300mg သောက်သုံးသောနှင့်အတူအနည်းငယ်သာကြွက်သားထုထည်အကျိုးအမြတ်အတွက်သတိထားမိပေမယ့်သေချာပေါက်မဟုတ်ဘဲအဆီထက်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လည်းမရှိ 600mg ၏အလယ်တွင်သောက်သုံးသောပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုအနည်းဆုံး5ပေါင်စုစုပေါင်းကြွက်သားထုထည်အမြတ်ပြသလေ့ရှိတယ်။ အဆိုပါအစွန်းရောက် 900mg သောက်သုံးသော 10 ပေါင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ကြွက်သားထုထည်တစ်ခုတိုးလာကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အားကောင်းဒြပ်ပေါင်းများတွင်တွေ့မြင်ရလဒ်များကိုမှနှိုင်းယှဉ်, ဒါပေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတွက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
သငျသညျကြိုတင်သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောသံသရာအစမှ2ရက်သတ္တပတ်တွေအကြောင်းလိုအပ်သောအစားအသောက်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့စတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ multivitamin နှင့်ငါးဆီနေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ယူအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသံသရာဖြည့်စွက်သကဲ့သို့သင်တို့ပရိုတိန်းဓာတ်များကိုတိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဟော်မုန်း Adrenosterone အမှုန့်များအသုံးပြုခြင်းခြားပြီးနောက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ကတည်းကကြောင့်သံသရာပြီးနောက်4ရက်သတ္တပတ်မှ6ဘို့အကောင်းတစ် post ကိုသံသရာကုထုံးထုတ်ကုန်ယူလိုအပ်ပါသည်။ သင်9ရက်သတ္တပတ် 300mg ၏ရှည်လျားသောသံသရာလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလိုအပ်သောမကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်အဆင့်မြင့်ဆေးညွှန်းအကောင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်သည်။ သငျသညျလုံလောက်စွာပြောင်းလဲမှုများရန်အသုံးပြုသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့အတွက်သည်းခံခြင်းပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခန်းအခါအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုဖြစ်ပျက်။
4.How Adrenosterone အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်?
ညွှန်ကြားနှင့်ထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောသံသရာလည်ပတ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် cortisol ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုထပ်တိုးပျော်မွေ့မြင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအစအမြောက်အများကိုတက်ကြွက်သားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဆီလျှော့ချကြောင်းအဆင့်ဆင့်မှာအီစရိုဂျင်၏ချိန်ခွင်လျှာစောင့်ရှောက်မည်။ အဘယ်အရာကိုအများဆုံးသုံးစွဲသူများကဆွဲဆောင်မှုရှာမသာလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမြန်ကြွက်သားတစ်သျှူး bulking လုပ်ပေမယ့်သင်ဖန်တီးသောအရာကို သာ. ကောင်း၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးသည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာဖို့လမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး:
testosterone ဟော်မုန်း Boost;
HPTA ၏ function ကို Restore;
Adrenosterone မှုန့် 5.Benefits
အဲဒီမှာအခြားထုတ်ကုန်များအပေါ် Adrenosterone အမှုန့်ကိုသုံးပြီးဖို့အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးဆုံး non-methyl ရေးဆွဲရေးသင့်ရဲ့အသည်းပေါ်မခက်ခဲကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤသည်အလွန်အရေးပါသောအကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုကာကွယ်ပေးရန်ထုတ်ကုန်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ် load မှမရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန်ယူနှင့်အပိုဆောင်းထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုက်ဆံကယ်တင်တော်မူ၏။ ကြံ့ခိုင်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့လိုသင်၏ကျန်းမာရေး၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဖြစ်နှင့် Adrenosterone အမှုန့်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကူညီပေးသည်ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
Adrenosterone အမှုန့်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ပျော့နှင့်လျှော့ချငွေပမာဏမှမျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပျော့ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှအနည်းငယ်ပျို့ချင်အထိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကသင့်လျော်သောပြင်ဆင်မှုပြုအစီအစဉ်ကိုအပြီးလျှင်သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိပင်ထိုအတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျ, သွေးဖိအားနဲ့ပြဿနာတွေသင်သည်သိပ်နောက်ကျသောနေ့၌ဆေးများယူလျှင်အိပ်ရတဲ့အတွက်အနည်းငယ်တိုးထွက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ပျော့နိမ့်ပြန်နာကျင်မှုကိုခံစားစေနိုင်သည်။ သင်ထုတ်ကုန်ယူအချိန်ကိုချိန်ညှိအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရန်ပုံရသည်။
Adrenosterone အမှုန့်လူကြိုက်များစေသည်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးကိုသင်အထူးသအဆီပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ကြွက်သားထုထည်တိုးလာ၏အရှိန်အဟုန်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့အသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာတစ်ဦးထက်ပိုသည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုခဲ့ဒီထုတ်ကုန်ကြည့်ဖို့ပုံမှန်ပါပဲ။ ဤသည်ကဆန္ဒရှိကြောင်းကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကာယဗလအဆင့်များအားလုံးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာစျေးကွက်အပေါ်တဦးတည်းအများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုလားသူဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကိုကောင်းစွာသတ်မှတ်ကြွက်သားတည်ဆောက်ကူညီခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအဆီတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ထို့နောက်သင်တစ်ဦးလိုလားသူဟော်မုန်းသုံးပြီးစဉ်းစားရန်လိုပေမည်။ Adrenosterone အမှုန့်ယနေ့အထိစျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမြင့်မားထိရောက်သောနှင့်ကန့်သတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
Adrenosterone အမှုန့်ကြွက်သားများနှင့်ကြွက်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တိုးမြှင့်, အဆီလျှော့ချဖို့ရောနှော avid အလေးမနှင့်ကာယဗလအသုံးပြုသောကြောင်း non-methyl လိုလားသူဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ mildest လိုလားသူဟော်မုန်း၏တဦးတည်းစဉ်းစားဆုံးနဲ့ထက်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကမ်းလှမ်းနေသည်။ ဒါဟာအသုံးပြုမှုကိုတစ်သံသရာစဉ်အတွင်းအသည်းအပေါ်လျော့နည်းကြမ်းတမ်းသည်နှင့် stacked, ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူနဲ့အခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဆေးလုံးသို့မဟုတ်အမှုန့်ဖော်မြူလာအတွက်သာမန်အားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာရရှိနိုင်ပိုမိုအကုန်အကျလိုလားသူဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အနိမ့်မှုနှုန်းကအသုံးပြုအဲဒီမှာပိုပြီးလူကြိုက်များထုတ်ကုန်ထွက်၏တဦးတည်းပါစေ။
III ကို။ Adrenosterone အမှုန့် HNMR
IV ။ AASraw ထံမှ Adrenosterone အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လိုနေသလဲ?
"Adrenosterone အမှုန့်" ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
09 / 01 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က52
09 / 12 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က46
09 / 13 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က26
06 / 19 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က13
08 / 29 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က11
09 / 17 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
09 / 16 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
09 / 15 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
09 / 14 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0